Accueil > Gazetin'ny nosy > Rivo Rakotovao : tsy mahafehy ireo senatera
Rivo Rakotovao : tsy mahafehy ireo senatera
Tranga iray mbola manaporofo ny maha fanjakan’i Baroa an’ity Madagasikara ity ny zava-niseho tany Sambava, ny fiandohan’ny herinandro teo. Nifanena tao anaty trano fivarotana na magazay ny loholon’i Madagasikara iray sy solombavambahoaka voafidy tany an-toerana ka niafara tamin’ny ady totohondry teny imasom-bahoaka. Voalazan’ny loharanom-baovao moa fa ilay senatera HVM, izay tsy iza fa i Befoto Angelin no nikasi-tanana voalohany ny depiote Mamangy Norbert, izay antsoina hoe Jack. Novakian’ingahy senatera mihitsy moa ny vavan’ny depiote raha ny fantatra. Ny antony nahatonga ny disadisa kosa dia tsy mbola fantatra hatreto ny tena fototra fa raha ny voalaza dia efa ela no tsy mifankahazo ny roa tonta. Tranga tsy mbola fahita teto amintsika moa izany hoe loholona midaroka sy mandratra solombavambahoaka izany raha tsy tamin’ity fitondran-dRajaonarimampianina ity. I Rivo Rakotovao raha nandray ny toerana maha filohan’ny Antenimierandoholona azy dia nilaza fa hamerina ny hasin’ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity kanefa toa vao mainka aza mamono ny hasin’izany atao hoe loholon’i Madagasikara izany ny fihetsiky ny senatera Befoto Angelin. Mampiseho ihany koa izao trangan-javatra izao fa tsy voafehin’ingahy Rivo Rakotovao ireo loholona eo ambany fitarihany. Tsy mahagaga izany satria sahirana amin’ny fanomanana ny fifidianana sy ny fikarohana ny paikady mbola hijanonana eo amin’ny fahefana ny tenany ka tsy afaka ny hijery na hanara-maso ny hadalan’ireo loholona. Marihana fa tsy nanaiky an’izao fikasihan-tanana azy izao ny depiote Mamangy Norbert sy ny fianakaviany ka nilaza ny hitondra ny raharaha eny amin’ny fitsarana. Raha ny fantatra dia nalefa maika handamina ity raharaha ity any Sambava ny senatera Betina Bruno sy ny senatera Amido.
Fenoarivobe : tafaverin’ny miaramilan’ny DAS ny omby 25
Nitrangana fanafihan-dahalo indray omaly maraina tao amin’ny fokontany Ambatofotsibe, kaominina ambanivohitr’i Kiranomena, distrikan’i Fenoarivobe. Lasan’ireo andian-dahalo ny omby miisa 250, niantso avy hatrany ny miaramilan’ny DAS ny fokonolona, raikitra ny fanarahan-dia.
Tsy lasa lavitra dia tratra ireo andian-dahalo ka raikitra ny fifandonana sy ny fifampitifirana. Dahalo iray no maty voatifitra teo ary ny ambiny nanao tari-dositra ka navelan’izy ireo ny omby halatra ary voaavotra soa aman-tsara ireo omby rehetra nangalarina. Vokatra ny fifampitifirana dia naratra voan’ny bala ihany koa ny iray tamin’ireo fokonolona mpanara-dia. Rehefa azo ireo omby halatra dia nisy ampahany tamin’ireo mpanara-dia no nitondra ny omby niverina fa ny sasany kosa nanohy ny fanenjehana ny mpanao ratsy. Teo amin’ny manodidina ny amin’ny 11 ora atoandro dia raikitra indray ny fifandonana tamin’ireo dahalo. Dahalo iray no maty voatifitra. Azo tamin’izany ihany koa ny fitaovam-piadiana MAS 36 nampiasain’izy ireo hanaovana ny asa fanafihana. Naratra teo ami’ny sorony kosa ny miaramilan’ny DAS iray izay nentina notsaboina avy hatrany any Kiranomena. Mbola mitohy ny fikarohana ireo dahalo ambiny ankehitriny. Marihina fa mafy orina ny fiaraha-miasan’ny fokonolona sy ny miaramilan’ny DAS any amin’ireo faritra mena.